Nanisana “sapin: olona telo indray maty nihotsahan’ny tamboho | NewsMada
Nanisana “sapin: olona telo indray maty nihotsahan’ny tamboho
Ankoatra ilay olona iray maty nianjeran’ny herinaratra, tetsy Ivandry, olona roa hafa no indray maty nihotsahan’ny tamboho lehibe, tetsy Nanisana ”sapin”. Namoa-doza tokoa iny orambe teto an-drenivohitra, omaly iny.
Mpandalo roa teny Nanisana nandritra ny orambe nikija omaly folakandro no niara-maty nihotsahan’ny tamboho lehibe iray tokony ho tamin’ny 3 ora sy 15 minitra. Mafy ny dona ary rava tamin’iny orambe narahin-kotroka iny ilay tamboho ka nilatsaka tamin’ireo tsy manan-tsiny. Vokany, nipotsaka tanteraka ny atidohan’ilay vehivavy iray, mpandalo teny an-toerana vokatry ny fihotsahan’ilay vato be teo amin’ilay tamboho, izay nanandrify ny lohany. Raha fahatapahan-tongotra kosa no tsikaritra tamin’ilay vata-mangatsiakan’ilay lehilahy iray hafa nandalo. Araka ny fantatra, tsy nananosarotra ny namoahana ny nofo mangatsiakan’ireo olona ireo. Loharanom-baovao hafa kosa nanambara fa ny fokonolona no nahatafavoaka ireo nofo mangatsiaka ireo nialohan’ny nahatongavan’ireo mpamonjy voina. ”Tsy nahita ny fihotsahan’ny orana aho fa nihidy tao an-trano fa ilay feo mafy no nanaitra anay rehetra tato an-trano” hoy ny mponina teny amin’ny manodidina. Teo izahay rehetra no taitra nahita ilay tranga ka nivoaka avokoa, hoy hatrany izy. Ny alika teto amin’ny manodidina nivovo be avokoa ary nitangoronana teo amin’ilay toerana daholo ny mpandalo rehetra nijery sy nifanolo-tanana namoaka ny razana, hoy kosa ny hafa. Taorian’ny tranga, natolotra ny manampahefana sy ny fianakaviany ireo nofo mangatsiaka ireo. Vehivavy bevohoka iray hafa ihany koa no maty tsy tra-drano, omaly tolakandro , main’ny herinaratra nandritra iny orambe, omaly, iny. Nahitana fihotsahan’ny tany ihany koa teny Ankatso tamin’io fotoana io. Tsy nisy ny aina nafoy sy naratra tamin’izany fa fahasimbana ara-materialy no tsikaritra.
Trano may teny Anosibe
Trano lehibe iray, misy rihana miisa efatra no may vokatry ny filatsahan’ny varatra, omaly tolakandro manodidina ny tamin’ny 03 ora latsaka fahefany teny Anosibe, akaikin’ny tetezana . Araka ny fantatra, may avokoa ny kojakoja rehetra tao an-dakozia sy ny fahitalavitra niampy ny fanaka ary ireo zavatra madinika tao an-trano nandritra ny loza. Mbola nirehitra ny afo tamin’ny fotoana nahatongavan’ny sampana mpamonjy voina teny an-toerana. Voafehy kosa izany, fotoana vitsy taorian’izay ary tsy niparitaka tamin’ny manodidina.
Trano iray misy efitrano miisa enina ihany koa no niharan’ny fahamaizana, omaly maraina tokony ho tamin’ny 9 ora sy sasany. Raha ny fanazavazan’ireo nanatri-maso dia tsy fantatra ny nahatonga ny loza fa ny afo efa nijoalajoala sy ny setroka no nanaitra ny manodidina. Fantatra tamin’ny fanadihadiana fa may avokoa ireo kojakoja samihafa tao amin’ireo rihana roa raha tsy naninona kosa ny tao amin’ny efitrano farany ambany. Entanina arak’izany ny rehetra amin’ny fanatsoahana ireo tariby rehetra mitsatoka mba hisorohana ny loza.